कहाँ सम्मिलित हुने - कुन राज्य संरक्षण र करको लागि उत्तम हो?
जब एक व्यक्तिलाई समावेश गर्ने राज्यको निर्णय गर्ने समय आउँदा 50 राज्यहरू वा कोलम्बियाको जिल्लाको कुनै पनि छनौट हुन्छ। किनकि कर्पोरेसनहरू चलाउने कानुनहरू राज्यमा फरक फरक हुन्छन्, त्यहाँ केही आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् कि कहाँ समावेश गर्ने भन्ने निर्णय लिनु अघि जाँच गर्नुपर्दछ। एक नयाँ व्यवसाय मालिकले आफैलाई सोध्न सक्ने पहिलो प्रश्न यो हो, "के हामी एक राज्यमा व्यापार गरिरहेका छौं, वा धेरै?" यदि व्यवसाय मुख्यतया एक राज्यमा सञ्चालन हुनेछ, तब त्यस राज्यलाई समाहित गर्दा सरल र सब भन्दा तार्किक छनौट हुन सक्छ। यदि त्यहाँ एक भन्दा बढी राज्यहरू छन् जहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिन्छ, तब व्यवसायलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ जुन कारकहरू अर्को राज्यमा समावेशीकरणमा संलग्न थिए। ती कारकहरूमा केहि समावेश छ, तर सीमित छैन:
निगमका निर्देशकहरू, अधिकारीहरू, र शेयरधारकहरूको जिम्मेवारी र अधिकार सम्बन्धी राज्यको कर्पोरेट कानूनहरू के हुन्?
लेनदारहरूको अधिकारको सन्दर्भमा राज्यको कर्पोरेट कानून के हो?
राज्यहरूलाई समावेशीकरणका लागि कर दर कुन हो?
एक राज्यमा समावेशीकरण बीचको लागतमा के भिन्नता छ, त्यो राज्यमा वैदेशिक निगमको रूपमा दर्ता गर्ने विरोधमा?
स्टीव र उसको भाइले कार, आरभी र डु boats्गाका लागि मोबाइल विवरण व्यवसाय सुरू गर्दैछन्। निगमनले प्रस्ताव गरेको दायित्व सुरक्षाको फाइदा लिन तिनीहरू आफ्नो व्यवसायलाई समाहित गर्दैछन्। तिनीहरू उत्तरदायित्व सुरक्षा चाहान्छन् कि उनीहरूको घर र निजी सम्पत्तिलाई मुद्दाहरूबाट जोगाउन जुन व्यवसाय गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्छ। उनीहरूले धेरै भेटघाटमा अपोइन्टमेन्ट जाने र जाने समय खर्च गरिरहेका छन्, साथै महँगो गाडीहरू सफा गर्ने छन्। तिनीहरूको व्यवसायको यस विन्दुमा, तिनीहरू केवल क्यालिफोर्नियाको आफ्नो गृह राज्यमा सवारीसाधनको बखत गर्दछन्। स्टीव र उसको भाइका लागि क्यालिफोर्नियामा समावेश गर्नु तार्किक छनौट हो। यदि तिनीहरूले एक राष्ट्रव्यापी विवरण व्यवसाय शुरू गर्दै थिए जुन धेरै राज्यहरूमा सेवाहरू प्रदान गर्ने थियो भने, त्यसोभए तिनीहरूले राज्यको कर्पोरेट कानूनको फाइदाहरू प्राप्त गर्न बिभिन्न राज्यमा समावेश गर्ने बारे विचार गर्न सक्दछन्। स्टीव र उनका भाइ डेलवेयर र नेभाडाले निगमनसम्बन्धी के प्रस्ताव राखेका छन् भनेर एक चोटि हेर्न चाहन्छन्।
आफ्नो लागि व्यवसाय सञ्चालनमा ध्यान नदिने कोहीले सोध्लान्, "किन डेलावेयर?" केही अनुसन्धान गरेपछि चाँडै नै एनवाईएसईमा सूचीबद्ध आधा भन्दा बढी कम्पनीहरू डेलावेयरमा समावेश भएको किन धेरै कारणहरू छिटो पत्ता लगाउन सक्दछन्। डेलावेयरसँग करन्सीको अदालत छ जसको कर्पोरेट कानूनसँग सम्बन्धित मामिलामा 200 वर्ष भन्दा बढी कानुनी उदाहरण छ, र धेरै व्यवसाय मैत्री छ। चान्सरीको अदालतमा भेटिएका न्यायाधीशहरूले कर्पोरेट केसहरूमा विशेषज्ञता पाउँछन्। तिनीहरू चुनावको विपरीत, योग्यता र कर्पोरेट कानूनको ज्ञानमा आफ्ना पदहरूमा नियुक्त हुन्छन्। डेलावेयरमा समावेश गर्नका केहि अन्य फाइदाहरू हुन्:
निर्देशकहरूको प्रारम्भिक बोर्डको नाम र ठेगानाहरूको खुलासा गर्न आवश्यक छैन।
सम्मिलित गर्नका लागि शुल्कहरू कम छन्।
त्यहाँ डेलावेयर कर्पोरेसनहरु डेलावेयर मा व्यापार गरीरहेको कुनै राज्य आय कर छैन।
डेलावेयरसँग कुनै बिक्री वा व्यक्तिगत सम्पत्ति कर छैन।
एक व्यापार कार्यालय आवश्यक छैन। केवल एक दर्ता एजेन्ट आवश्यक छ।
एक व्यक्ति अफिसक, निर्देशक, र कर्पोरेसनको शेयरधारकको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ।
सेयरधारकहरू औपचारिक आमने सामने बैठकहरूको एवजमा लिखित निर्णय लिन सक्दछन्।
विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू एक कर्पोरेट छत अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
द्रुत निगमित प्रक्रिया। डेलावेयरसँग पनि 1 घण्टा सम्मको व्यवसायमा समाहित हुने विकल्प छ।
नेभाडा एकदम लोकप्रिय राज्य बन्न गएको छ जहाँ यो व्यवसायलाई प्रदान गरिएको फाइदाहरूको कारण समाहित भएको छ। नेभाडामा समावेश गरेर प्रस्ताव गरिएको कडा दायित्व र सम्पत्ति सुरक्षाको अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य लाभहरू पनि छन्। नेभाडाले फ्रान्चाइजी कर वा कर्पोरेट आय कर लगाउँदैन। त्यहाँ कुनै व्यक्तिगत आयकर छैन, स्वामित्वको प्राइभेसी गोपनीयता, कर्पोरेसन गठन गर्न सकिने गति, कर बचत, र कम स्टार्टअप लागत। नेभाडाले डेलावेयरका लागि सफल विधि रहेको कुराको आधारभूत कुरा लिएको छ, र तिनीहरूलाई अलि अलि अगाडि लिएको छ। नेवाडामा अझै त्यस्तो मुद्दा छ जहाँ कर्पोरेट घुम्टो छेडियो, जानाजानी ठगीको मामला बाहेक। निगमनका लागि नेभाडा तर्फ धेरै आकर्षित हुने कारणहरूको सारांश।
निगमको तर्फबाट कार्य गर्ने निर्देशक र अधिकारीहरूको लागि कडा दायित्व संरक्षण।
कम सुरुवात र वार्षिक लागत
कर बचत। नेवादामा व्यवसाय गरिरहेका नेवादा कर्पोरेसन राज्य आयकर मुक्त छ।
गोपनीयता नेभाडा निगम शेयरधारकहरू सार्वजनिक रेकर्डमा छैनन्।
नेभाडा राज्यले आईआरएस संग सूचना साझा गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेन।
नेवाडा एक मात्र राज्य हो जसले "बेयरर सेयर" जारी गर्न अनुमति दिन्छ। यी सेयरहरू स्वामित्वमा छन् जोसँग यस समयमा उनीहरूसँग छ, यसैले विश्वासयोग्य साथी वा परिवारको सदस्यलाई संकटको समयमा सेयरहरू समात्न अनुमति दिँदछ।
न्यूनतम रिपोर्टिंग र प्रकटीकरण आवश्यकताहरू।
निर्देशक शेयरधारक हुनु आवश्यक छैन।
नेभाडा निगमहरू पूंजी बढाउन स्टक जारी गर्न, रेन्डर गरिएका सेवाहरू, व्यक्तिगत सम्पत्ति, र घर जग्गा सम्पत्तिको लागि क्षमता राख्छ। निर्देशकहरूसँग यी उदाहरणहरूमा मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता छ, र तिनीहरूको निर्णय बाध्यकारी छ।
जबकि त्यहाँ विकल्प र छनौटहरूको एक समूह छन् जब यो समावेश गर्ने राज्य छनौट गर्ने समय आउँदछ, समावेशीकरणले कम्पनीलाई दायित्व र सम्पत्ति सुरक्षा दिन्छ जब सही तरिकाले सञ्चालन हुन्छ समान हुन्छ। अमेरिकी सपना बाँच्न र व्यापारको स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दा तपाईंको सम्पत्ति र सम्पत्तिलाई हानि पुर्‍याउने तरिकाबाट बाहिर राख्नु प्रमुख प्राथमिकता हो। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको सामना गरिसकेपछि, राज्यलाई सामेल गर्न राज्यको छनौट गर्दा कर फाइदाहरू, मुद्दा दायर संरक्षण, अपरेशनको लचिलोपन, गोपनीयताको डिग्री, र संगठनात्मक संरचनाले व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने, र कुन राज्यले यी आवश्यकताहरू सबै भन्दा राम्रो पूर्ति गर्छ भन्ने कुरामा उक्लनेछ।